အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Other Problems » အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem]
1 အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 21st March 2010, 2:25 pm
mozilla firefox ကမေးဖွင်.လို.မရဘူး ဖြစ်နေတာ gmailထဲတော. ၀င်သွားတယ်ပြီးတော. ကျွန်တော် user accountရိုက်လိုက်တဲ.အချိန်မှာ သူကမရဘူး လို.ဘဲပြောနေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်မသိလို.
လူတစ်ယောက်ကတော. ပြောတယ် အဲ.ဒါ mozilla firefox ကို upgrade ပြန်လုပ်ရမှာတဲ. အသစ်ပြန်သွင်းချင်သွင်း တဲ. စက်တိုင်းလိုလို ဖြစ်နေတာ သူပြောတာ clear ပြန်လုပ်ကြည်.ရင်လဲရနိုင်တယ်တဲ.ကျွန်တော် တော. သေချာမစမ်းရသေး ဘူး အဆင်ပြေမယ်. နည်းလမ်းလေးပြော ပြပေးပါဦးနော်
2 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 21st March 2010, 2:38 pm
computerထဲမှာ စာရိုက်တဲ.အချိန်မှာ စာဟာအမြဲနောက်ကြနေတယ် ဗျာ သူတို.ထင်ကြေးပေးတာက keyboardမကောင်းတော. ဘူး တဲ. ကျွန်တော်တော.အဲ.လိုမထင်ဘူးပြီးတော. သူ.စက်မှာ user account ထောင်ထားတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ထင်တာလုပ်လိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော. သေချာမပြော တတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်က user account ကို ဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်ဗျာ ပြီးတော.လည်း အသစ်ထောင်ပေးလိုက်တယ် မြန်လာတာတွေ.ရပါတယ် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေး ပြီးတော. တခြားအဆင်ပြေမယ်.နည်းလမ်းလေး ပြောပြပါနော်
3 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 21st March 2010, 2:46 pm
ကျွန်တော်vista themes လေး အုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမယ့်စက်က refresh ပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဗျာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲအကြံပေးပါနော် ကျွန်တော် stick ကို သူငယ်ချင်း ကိုငှားလိုက်တာ stick က ဖွင့်လို့တော.ရပါတယ် ဒါပေမယ့်ဖြတ်လို့လဲမရ format ချလို့လဲမရ သွင်းလို.လဲမရ ဘာဖြစ်သွားတာဗျ ပြောပြပါနော် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်တော့ သူလုပ်ပေး ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူလုပ်ပေးတဲ့ပုံ မှာ iconပြောင်း သွားတယ်ဗျာ folder ပုံဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်လို လုပ်တာလဲတော့မသိဘူုး ကျွန်တော်ကို သူငယ်ချင်း တွေကကြွားသွားတယ် ပညာပြသွားတာပေါ့နော် ကျွန်တော်ကလည်း အတာနေမှာပါ ပြောပြပါဦးဗျာ
စာလုံးပေါင်းပြင် :cry :cry :cry
Last edited by naywintun.konay on 29th March 2010, 11:34 am; edited 1 time in total
4 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 21st March 2010, 3:01 pm
firefox upgrade ပြန်လုပ်ရမယ်.. ? ဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်မှာပေါ့
တစ်ခါတစ်လေ ကွန်မကောင်းရင်.PW မှား ရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ
ကျနော့ဆီမှာ လဲဖြစ်တာပဲ အဲလို..အခုတော့ ပုံမှန်ပဲ
keyboard delay ဖြစ်တာက စက်ဟမ်းရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်
run>control keyboard>မှာ speed တွေ အမြင့်ဆုံးထားပြီး စမ်းကြည့်ပါဦး
အခုမှ ကြည့်မိတယ် တတိယမေးခွန်း က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဟင်
5 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 22nd March 2010, 8:19 am
naywintun.konay wrote: mozilla firefox ကမေးဖွင်.လို.မရဘူး ဖြစ်နေတာ gmailထဲတော. ၀င်သွားတယ်ပြီးတော. ကျွန်တော် user accountရိုက်လိုက်တဲ.အချိန်မှာ သူကမရဘူး လို.ဘဲပြောနေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်မသိလို.
ကျွန်တော်လဲဖြစ်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်တာလဲအဲလိုမျိုးပဲ။ Gmail Account ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် Certificate Error ဆိုပြီးပြတယ်ဗျ။ သူပြောတဲ့ပုံက Certificate လဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတယ်။ ကျွန်တော်ပြေလည်သွားတာက CMOS Date ကိုရှေ့တိုးလိုက်တယ်။ ဆိုကြပါစို့ဗျာ - ကျွန်တော်က Firefox 3.5 တင်ထားတယ်။
ကျွန်တော့ Date က 2008 ခုနှစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ Error မျိုးတတ်တယ်ဗျ။ သဘောကတော့ ဒီ Certificate ထုတ်တုန်းက ဒီနှစ်မဟုတ်တဲ့အတွက် မသိပါဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပဲ။ အဲဒီတော့ Date အမှန်ထည့်ပေးလိုက်တော့ OK သွားရော။ Date တွေကိုလဲ တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ပါဦး။ နောက်ပြီး Update လုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ကြည့်ပါလား။ အပန်းကြီးတာမှမဟုတ်တာ။
6 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 22nd March 2010, 8:38 am
naywintun.konay wrote: ကျွန်တော် usb ကို သူငယ်ချင်း ကိုငှားလိုက်တာ stick က ဖွင့်လို့တော.ရပါတယ် ဒါပေမယ့်ဖြတ်လို့လဲမရ format ချလို့လဲမရ သွင်းလို.လဲမရ ဘာဖြစ်သွားတာဗျ ပြောပြပါနော်
ဖျက်မရ၊သွင်းမရ ဆိုတော့ r-click>property>security>permission တွေ deny ဖြစ်နေရင်..ပြန်ဖြုတ်ပါ
format ချချင်ရင် နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဖိုရမ်မှာရှာကြည့်ပါဦး.
naywintun.konay wrote: သူလုပ်ပေးတဲ့ပုံ မှာ iconပြောင်း သွားတယ်ဗျာ folder ပုံဖြစ်သွားတယ်။
ဘယ်လို လုပ်တာလဲတော့မသိဘူုး ကျွန်တော်ကို သူငယ်ချင်း တွေကကြွားသွားတယ်
ပညာပြသွားတာပေါ့နော် ကျွန်တော်ကလည်း အတာနေမှာပါ ပြောပြပါဦးဗျာ
removal disk icon ကကြိုက်သလိုပြောင်းလို့ ရပါတယ်
7 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 29th March 2010, 11:48 am
ကျွန်တော် မေးစရာလေးရှိပါတယ် ကျွန်တော် ဆိုက် က main profile မှာ background လေး ပြောင်းချင် တယ်
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ပြီးတော. လည်း အကိုတို.ပေးတဲ. ကုဒ်ကို ထည်.ကြည်.တာ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ် ဘာလို သေးလဲပြော ပြ ပါနော် အကို
8 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 29th March 2010, 12:09 pm
Profile Background က ဘယ်မှာထည့်ချင်တာလဲ
ဘယ် Site မှာ ထည့်ချင်တာလဲ မသိ..ဒီဆိုဒ် မှာတော့ရဘူးဗျ
ဘယ်ကုဒ် ကိုထည့်လို့ မရတာလဲ မသိဘူးခင်ဗျ
9 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 31st May 2010, 11:43 am
ကျွန်တော် ပြော တာကို ခုလိုဖြေပေးတဲ. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ.ဆိုက်ပါ ကျွန်တော် ထောင်တဲ.ဆိုက်မှာ လှလေးတွလုပ်ချင်တာ ပါ အကိုပြော ပြနိုင်မလာ မသိဘူးနော် ပြီးတော.လည်း ကျွန်တော် ပုံ အရှင်လေးတွေ ထည်.ချင်တယ် ကျွန်တော် ကို လက်တွေ.ကျကျလေးပြော ပြ ပေး ပါနော် ကျွန်တော် backgroundပြောင်း တတ်အောင် လေ.လာနေတာ ခု ထိမရသေး ဘူး ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ သူများတွေ လို. ဘောင်ခတ်ပြီးသားစာလေးတွေရေးချင်ပါတယ် "လူကအနူစားတော.တူနဲ.လို.တော. မပြော ပါနဲ. နော်" ကျွန်တော်တကယ်တတ်ချင်လို. ပါ
10 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 31st May 2010, 11:55 am
ကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိပါသေး တယ် ဗျ ကျွန်တော်(central processing unit)=(cpu) ကနေ support မဖြစ်တာ ကို ကျွန်တော် နားလည်အောင်ရှင်းပြပေး ပါနော်ဘာလို.လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စက်တစ်ခုကို စမ်းလိုက်တာ (central processing unit)=(cpu) လဲလိုက်တာ boardမတတ်တော. ဘူးဗျ ကျွန်တော် မေးချင်တာ က support ဖြစ်စေမယ်ဟာလေး အလွယ်ကူ ဆုံး ယှဉ်တွဲပြပေးပါနော် ကျွန်တော် ဒီပုံစံအတိုင်း ဆိုစာတွေပြန်ဖတ်ရမယ်နဲ.တူုတယ်နော် အကို အကို ဖတ်ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးပါနော်
11 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 31st May 2010, 12:01 pm
အကို ကျွန်တော် မေးစရာလေး တွေကို တစ်ခု ဆီမေး မယ်နော် အဟီး အားတော. နာ ပါတယ် ကျွန်တော် မီတာတံတိုင်း တာ တစ်ခုချင်း ဆီရဲ.မြန်မာလို ဘာသာပြန်လေးကို အကို ကိုယ်တိုင်နူတ်ထုတ်ထားတဲ. ပုံစံဖြင်လို.ချင် ပါသည် link မပေးနဲ.နော် အကို ရေးပေးပါနော်
12 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 31st May 2010, 1:52 pm
အစ်ကိုအစ်ကို နဲ့ ဘယ်အစ်ကိုကိုပြောတာလဲတော့မသိဘူး။
ပထမ က ဘယ်ဆိုက်မှာပုံထည့်ချင်တာလဲ။ Main Profile မှာပုံထည့်ချင်တယ်ဆိုတာ ထည့်ခွင့်ပေးတဲ့ဆိုက်ရှိတယ်။ မပေးတဲ့ဆိုက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ဆိုရင် Admin တွေမပြောနဲ့ Founder တောင်ထည့်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ဘယ်ဆိုက်ဆိုတာကို ပြောမှ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီဆိုက်ကို နမူနာတစ်ခုလုပ်မယ်။ ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလား ကြိုးစားကြည့်မယ်။ ရရ မရရ ပြန်ပြောပေးမယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်ဆိုက်ဆိုတာကိုအရင်ပြောပါ။
ဒုတိယ မေးခွန်းကတော့ အများကြီးဖြေရမှာဗျ။ ဘယ် Board နဲ့ ဘယ် CPU ဆိုတာကို ကျွန်တော်လဲအလွတ်မရဘူး။ အများအားဖြင့်ကတော့ သိတတ်ပါတယ်။ မသိရင်လဲ windows ပြန်တင်လိုက်ရင် သိသွားတာများပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ 8086 မှာ Core i7 ထည့်လို့တော့မရဘူးဗျ။ အဲဒီတော့ ဘာနဲ့ဘာနဲ့ မတော်တာလဲ ဆိုတာမျိုးကို ပြောပေးမှ အသေးစိတ်ကို ရှာဖွေကြည့်လို့ရမှာပါ။
တတိယ မေးခွန်းကတော့ မီတာတံတိုင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်မီတာတံလဲ။ Mother Board Tester ကိုပြောတာလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အဲဒီမှာ Manual Guide ပါပါတယ်။ ဘယ် Code ပြရင် ဘာဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ပေါ့။ တခြားမီတာတံဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်လဲမသိပါဘူး။ ဘယ်မီတာတံဆိုတာတော့ ပြောပေးပါ။
13 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 3rd June 2010, 7:40 pm
အစ်ကိုရေ...အစ်ကိုမေးတဲ့ဟာကို နားမလည်လို့ ပါ... 478 board လား 775 board လား Board type မတူရင်လည်းမရနိုင်ပါဘူး.... အစ်ကိုရေ...နောက်တစ်ခုက Board Brand နဲ့CPU Brand ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်...
14 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 7th June 2010, 2:28 pm
အဲ.ဒါဆိုအကိုတို. ကို ကျွန်တော် မေးမယ်နော် ကျွန်တော်တစ်ခါက ဆိုင်မှာစက်တစ်လုံးရောက်လာတယ် board လုံးဝမတတ် ဘူး အဲ.ဒါနဲ.ကျွန်တော် အကုန်ပြန်စစ်ကြည်.လိုက်တယ် အပြစ်ကရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ နောက်ဆုံး microprcessor ကို ဖြုတ်ပြီး စမ်းလိုက်တယ် နောက်တစ်ခုနဲ. ရတယ် ဗျ ပြီးတော. လည်း သူ.ဟာကို တခြားစက်မှာလဲစမ်းလိုက်တယ်ရတယ်ဗျာ
ရသေးပြန်တယ် ဗျာ အဆင်ပြေဆုံး နာလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါနော် အကို
ပြီးတော. လည်း ကျွန်တော် ပြောချင်တဲ.ဆိုက်က [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုက်ပါ အကို
ကျွန်တော်ထောင်ထားတာ ပါကျွန်တော် မလုပ်တတ်သေးလို. အသးစိတ်ကို တစ်ခုချင်းဆီ ကျွန်တေ်.ဆိုက်ထဲမှာပြောပြပေးပါ.လားအကို
15 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 7th June 2010, 2:36 pm
ခုနက ကျွန်တော်ပြော တာကျန်ခဲ.သေးတယ် ကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်ပြန်ကြည်. လိုက်ဦးမယ်နော် နောက်တစ်ခုပြောချင်ပါသေးတယ် auto shutdown ကျတဲ.ကိစ္စပါ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပါဦးဗျာ ဒါပေမယ်.တစ်ခုပြောစရာရှိသေးတယ် သူ.ကို ဖွင်.ပြီးဘာမှမလုပ်ရင်တော. မကျပါဘူး
တစ်ခုခုဖွင်.လိုက်မှကြတာပါ ဒါပေမယ်. သူကြချင်တ.ဲဟာမှကြတာ အဆင်ပြေနိုင်တဲ.အကြောင်းပြချက် လေးရယ်ပြီးတော. နောက်တစ်ခါ လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပြောပြ ပေးပါ
16 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 7th June 2010, 2:46 pm
ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ.မီတာတံက အုမ်းတို.ကြိုးပြတ်မပြတ်ရယ်ပြီးတော. တကယ်အလုပ်မလုပ်ရယ် သူ.ရဲ.ကိုယ်ပိုင်တန်းဖိုးထက်လျှော.နေလား သိချင်တာ ရယ် ပါ သူက ၃၅၀၀ , ၄၀၀၀ လောက်ဘဲ ရှိပါတယ် ကျွန်တော်က အသေးစိတ်သိချင်လို. ပါ digital ကတော.ဈေးကြီးပါတယ် ကျွန်တော်ပြောတာ တရုတ် ဘယ်မီတာလဲဆိုတော. ကျွန်တော် လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဗျ
17 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 7th June 2010, 3:34 pm
naywintun.konay wrote: အဲ.ဒါဆိုအကိုတို. ကို ကျွန်တော် မေးမယ်နော် ကျွန်တော်တစ်ခါက ဆိုင်မှာစက်တစ်လုံးရောက်လာတယ် board လုံးဝမတတ် ဘူး အဲ.ဒါနဲ.ကျွန်တော် အကုန်ပြန်စစ်ကြည်.လိုက်တယ် အပြစ်ကရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ နောက်ဆုံး microprcessor ကို ဖြုတ်ပြီး စမ်းလိုက်တယ် နောက်တစ်ခုနဲ. ရတယ် ဗျ ပြီးတော. လည်း သူ.ဟာကို တခြားစက်မှာလဲစမ်းလိုက်တယ်ရတယ်ဗျာ
အကို ရေ .. ကျွန်တော် ပြောကြည့်မယ်နော် ... အကို တခြား စက်မှာ စမ်းတာလဲ ရတာဆိုတော့ အကို စက်က board က တစ်ခုခု မှားနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ... ဒါမှမဟုတ် mother board ကိုပြန်တပ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါဦးလား ... Mother board ကိုတပ်တဲ့ အခါမှာ သတိထားပြီးတော့ တပ်ကြည့်ပါဦး .. ကျွန်တော် တစ်ခါ ဖြစ်ဖူးတာတော့ ကျွန်တော့စက်မှာ cpu fan အသစ် ကို လဲ ပြီးတော့ တပ်လိုက်တာ မှာ အဲဒီ့ ကနေပြီးတော့ လျှပ်စီးဝင် သွားတယ် ..ပြီးတော့ ကျတော့ လည်ရုံပဲ လည်တယ်ဗျ .. ဘာမှ ကို မတက်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတာ ...
အဲဒါနောက်တော့ ၀ါရှာကလေးတွေ ခံလိုက်တာ ပြန်အဆင်ပြေသွားပါတယ် .. အဲဒါကလေးတွေ ဂရုစိုက်ကြည့်ပါဦးနော် ....
မှားနေရင်လည်း ပြန်ပြောပေးပါခင်ဗျာ ...
18 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 7th June 2010, 9:27 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ကျွန်တော်ပြောဖို.ကျန်တာက microprocessor ရဲ. speed ပါ တစ်ခုက 2.0 တစ်ခုက 2.0
ကျွန်တော် အဆင်ပြေတာ က 2.4 နဲ.ပါ အကိုပြောတာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော် ကို အကျိုးအကြောင်းလေးနဲ.ပြော ပြပါနော် အကိုပြောသလိုလုပ်သင်.ပါတယ် အဲ.ဒါက တကယ်.မြွေ
ရော်ကိန်း လေ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
19 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem] on 7th June 2010, 9:51 pm
ကျွန်တော် တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် ကျွန်တော် window XP service park2version 2006
တင်တာ file မစုံဘူးလို.ဘဲပြောနေတယ် ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး စတင်ပြီးတဲ.အချိန်ဘဲပေါ်တာပါ
နောက်တော. မပေါ်တော. ဘူး ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို တိတိကျကျသိချင်လို.ပါ
20 Re: အကိုတို.ကိုမေးစရာလေး၇ှိလို. ပါ [Problem]